विमलको झुटको पर्दा उठ्दैछ यसरी - खबरम्यागजिन
Homeम्यागजिनविमलको झुटको पर्दा उठ्दैछ यसरी
विमलको झुटको पर्दा उठ्दैछ यसरी
February 25, 2021 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि म्यागजिन 0
विमल गुरुङ कोलकाता आएको दिन सोझै तृणमूलको एक मन्त्रीको कार्यालयमा प्रशान्त किशोरलाई भेट्न गए। गुरुङलाई पिकेले त्यहीँ बोलाएका थिए। विमल गुरुङले सोचेका थिए, कोलकाता पुगेर तृणमूलका नेताहरूसित उनको बैठक हुनेछ। त्यसपछि संयुक्त पत्रकारसम्मेलन हुनेछ। उनले आफ्ना नेतृत्व र कार्यकर्ताहरूमा यस्तै हल्ला फैलाएका थिए। तर त्यस्तो केही भएन। प्रशान्त किशोरले नै विमललाई बस्ने होटलको बन्दोबस्त गरेका थिए। सोही होटलमा पत्रकार सम्मेलन गर्न पिकेले नै पत्रकारहरू भेलासमेत गरेका थिए। त्यहीँ पिके र विमलको डिल पक्कापक्की भएको हो।
विमल गुरुङको सपना थियो, जिटिएको चौकीमा बस्ने। भर्खरै एउटा जनसभामा पनि उनले भनेका थिए, ‘अब विनय-अनितको समय 15/20 दिन मात्र छ। म त्यसै आएको होइन, त्यसपछि मेरो पालो हो।’
त्यो पालो अब6महिनासम्म विमल गुरुङले पाउँदैनन्। ममताको सरकारले अनित थापाको कार्यकाल अझ6महिना बढाएको छ। हिजोसम्म विमल गुरुङले आफ्ना समर्थकहरूलाई भ्रममा राखेका थिए। उनले प्रचार गरेका थिए, आफू जिटिएमा फर्किने। त्यही कुरामा सरकारसित सम्झौता भएको हो। विमल गुरुङ सत्तामा फर्किने लोभले धेरैले उनलाई समर्थन गरेका थिए। उनीहरूले सोचेका थिए, ‘विमल गुरुङ जिटिएमा फर्किन्छन् त्यसपछि दुधभात खाइन्छ।’
विमल गुरुङ, रोशन गिरीलगायत उनका समर्थकहरूलाई ममता व्यानर्जीको सरकारले लोप्पा खुवाइदियो। विमल गुरुङको झुट सार्वजनिक भयो। जनसभामा त भन्यो भन्यो विमल गुरुङ जसलाई भेटे पनि भनिरहेका थिए, जिटिएको सत्ता त मेरै हो। थाहा छैन कुन विश्वासको आधारमा विमलले जिटिएको चौकीमा बस्ने सपना देखेका हुन्। यद्यपि ‘दाजुले भनेको हो, सत्य हुन्छ नै’ भनेर उनका समर्थकहरूसमेतले विमल गुरुङ सत्तामा फर्किने हल्ला फैलाइरहेका थिए।
मार्चमा जिटिएको मियाद सकिनेवाला थियो। यसैलाई केन्द्र गरेर विमल गुरुङले हरेक जनसभामा अनित थापाहरूको समय सकिएको भन्दै प्रचार गरिरहेका थिए।
वास्तवमा त्यो विमल गुरुङले देखेको दिवा सपना मात्र थियो। न त उनलाई राज्य सरकारले कुनै आश्वासन दिएको छ, न त विमल गुरुङले नै राज्य सरकारसित कुराकानी नै गरेका छन्। तरै पनि वयोवृद्ध नागरिकहरूलाई हजार रुपियाँ बाँड्ने र सडकसमेतको शिलान्यास गर्ने उटपटाङ काम गरेर विमल गुरुङले सत्तामोह प्रकट गरिरहेकै छन्।
पिकेको जबकार्डमा विमलको हि…हि…
विमल गुरुङलाई लागेको थियो, एकपल्ट पहाड फर्किन पाउँ, जनताको मन जित्छु। तर 13 जना आन्दोलनकारी मार्ने ममता व्यानर्जीलाई नै फेरि मुख्यमन्त्री बनाउँछु भन्दै आउनसाथ विमलको दुर्गति शुरु भयो।
दलका बलिया नेताहरू सबैले पार्टी छोडे। केही बलिया नेताहरू विमल गुरुङको दैनिकरुपमा प्रकट हुने सत्तालोभ र गालीको राजनीतिबाट दिक्क मानेर मौन बस्न बाध्य छन्। उनीहरू म गोजमुमोको-1 एकका नेतृत्व हूँ भन्नसमेत नसक्ने अफ्ठ्यारोमा छन्।
फर्कँदा विस्थापित फर्काउनको लागि ममतासित मिलेको भने पनि फर्किसकेपछि ती नै विस्थापितहरूले पार्टी छोड्न थालेपछि विमलको वास्तविकता एकएक गरेर सार्वजनिक हुँदै गयो।
स्पष्ट छ, विमल विस्थापित फर्काउन ममता व्यानर्जीसित मिलेका होइनन, विमललाई ममता व्यानर्जीका रणनीतिकार प्रशान्त किशोरको आइप्याकले 2019 मा पहाड, तराई र डुवर्समा गरेको सर्वेअनुसार 2021 को विधानसभा चुनाउमा प्रयोग मात्र गरिएको हो।
पिकेको आइप्याकले 2019 मा गरेको सर्वेमा विमल गुरुङको पकड पहाड, तराई र डुवर्समा बलियो पाएको थियो। सोही सर्वेअनुसार विमललाई 2021 को विधानसभा चुनाउमा प्रयोग गर्न सकिने पिकेले अभिषेक व्यानर्जीलाई परामर्श दिएका थिए। कहिल्यै नजितेको दिलिप घोषको समष्टीमा तृणमूलको खाता खोलिदिने (विधानसभा चुनाउ) पिकेले ममताको छवि बनाउन यस्ता कारगर योजनाहरू बनाएका छन्, जसलाई प्रयोग गरेर यसपल्ट ममता व्यानर्जी सरकारमा आउन सक्ने पर्याप्त सम्भावना छ। यस्तोमा पिकेले दिएको कुनै पनि परामर्शलाई ममता व्यानर्जीले नकारेकी छैनन्।
विमललाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे पनि 2019 को सर्वेअनुसार नै ममता व्यानर्जीलाई परामर्श दिएपछि विमल गुरुङलाई कोलकाता झिकाइएको हो।
पिके र विमलको डिल
विमल गुरुङलाई जसरी भए पनि पहाड पुग्न पाए सत्तामा पुग्न जनता लट्याउन सकिन्छ भन्ने लागेको हो। त्यसैले पिकेको परामर्श उनलाई मन परेको हो। पिकेसित विमल गुरुङको डिल हो तराई, डुवर्सको 16 वटा सिटमा तृणमूललाई जिताउने। जहाँजहाँ पनि गोर्खा भोट फ्याक्टर छ, त्यहाँ विमलले जितेर देखाउने। यसो हुन सके विमललाई पक्राउ नगर्ने र घर फर्कन दिने। चुनाउ जिताउन विमल गुरुङ पहाड फर्किन पाउनसाथ उनका समर्थकहरू पनि फर्कन पाउने भए।
तर विमलले स्वतस्फुर्त फर्कन पाइरहेका समर्थकहरूलाई ‘विस्थापित’ गोटीकोरुपमा प्रयोग गरे। विस्थापित फर्काउन विमल ममतासित मिलेका होइनन्, 16 वटा सिटमा गोर्खा भोट तृणमूलको पक्षमा तान्न पिकेसितको डिलको कारण उनका समर्थकसहित विमल पहाड फर्किएका हुन्।
चुनाउ जिताउने डिल गरेर फर्किएका विमलले विस्थापित गोटी चालेर क्रान्तिकारी आन्दोलनकारीलाई महागद्दार सावित गरिदिए।
विस्थापितको लागि ममतासित मिल्नु परेको भन्ने मन्तव्य विमलको अर्को झुटको प्रमाण हो। तराई, डुवर्सको 16 सिटमा तृणमूललाई जिताउने सर्तमा पहाड आउँदा विस्थापितहरू स्वतस्फुर्त घर फर्किने थियो, तर विस्थापितसमेतलाई बदनाम गर्दै विमल गुरुङले भावुक राजनीति गरे। उनको यही करामत मन नपराएर धेरै विस्थापितले विमलको साथ छोडिसकेका छन्।
गठबन्धन होइन भोटको व्यापार
विमल गुरुङको राजनीति वा कुटनीति उनकै समर्थकहरूले समेत भेउ पाएनन्। जजसले भेउ पाएका छन्, सबैले भटाभट उनको साथ छोड्न थालेका छन्। हिजोअस्तीसम्म जङ्गलमा दुःख पाएको भन्दै सिलगढीको जनसभामा रुने विमल गुरुङ अहिले पैसा बाँड्दै हिँडिरहेका छन्। त्यो पैसाको सोर्स के हो त? कसैलाई थाहा छैन।
विमल भन्छन्, उनको पार्टीको गठबन्धन तृणमूल काङ्ग्रेससित हो। तर यो पनि केवल विमलको मन्तव्य हो। अहिलेसम्म न त ममता व्यानर्जी न त तृणमूल काङ्ग्रेस, कसैले पनि विमलसित गठबन्धन गरेको आधिकारिक घोषणा गरेको छैन।
गठबन्धन हो भने विमलको बैठक तृणमूलका नेताहरूसित हुने थियो, ममता व्यानर्जीसित हुने थियो। तर ममता व्यानर्जीले आजको मितिसम्म विमललाई भेट्नु त परको कुरा, नामसमेत काडेका छैनन्। यो कस्तो गठबन्धन हो, जसबारे न त ममता बोलेकी छन्, न त तृणमूल। तृणमूलसित गठबन्धन हुनु हो भने विमल गुरुङ कोलकातामा पिकेसित किन बैठक गर्थे त? किन पिकेले होटल, पत्रकारसम्मेलनको बन्दोबस्त गर्थे त?
सबैले जान्न अनिवार्य छ, पिके तृणमूलका नेता होइनन्। उनी भोट व्यापारी हुन्। नरेन्द्र मोदीको चुनावी रणनीति बनाएर भारतको राजनैतिक रणनीतिकारकोरुपमा चुनाउ वा भोटको व्यापार शुरु गरेका पिकेको आइप्याक नामक कम्पनी छ। यो कम्पनीले जोकोहीलाई जिताउने रणनीति बनाउँछ। चुनाउको रणनीति बनाउन करोडौं रुपियाँको डिल हुन्छ। ममता व्यानर्जीको चुनावी रणनीति बनाउन पनि पिकेले करोडौं रुपियाँमा डिल गरेका छन्।
विमल गुरुङको डिल सोही पिकेसित हो। विमलले तराई डुवर्सका 16 सिटमा जिताउन पिकेसित डिल गरेका हुन्। अर्थात जनताको भोट बेचेर विमल आफ्नो अस्तित्व बचाउन चाहन्छन्।
तृणमूललाई जिताए विमललाई पक्राउ गर्ने सम्भावना बन्दैन। यसैले विमललाई आफू बाच्ने सबैभन्दा उत्तम मौका नै पिकेसित डिल गर्नु थियो।
किन विमलको मात्र मुद्दा माफी?
यदि विमलले तृणमूलसित गठबन्धन गरेको हुँदो हो 2017 मा लागेका सबै मुद्दा माफी हुन्थ्यो। वा ममता व्यानर्जीसित मुद्दा माफी गर्ने सम्झौता हुन्थ्यो। तर डिल प्रशान्त किशोरसित भएको हुनाले सबै मुद्दा माफी गर्न विमलले दवाब दिन वा सम्झौता गर्न नसकेका हुन्। गठबन्धन तृणमूलसित हुँदो हो त सरकारले सबै मुद्दा फिर्ता गर्न सक्थ्यो तर यस्तो भएन। विमललाई लागेको 126 वटा मुददामा 60 वटा मुद्दा माफी गर्ने हल्ला छ।
त्यो पनि नवान्नले आधिकारिक घोषणा गरेको छैन। मुद्दा माफी पनि केवल विमल गुरुङको हुने हल्ला छ। अरु कार्यकर्तालाई लागेको मुद्दा ज्युँको त्युँ हुनेछन्। यसको अर्थ पिकेसित विमलले केवल आफू बाच्नलाई मुद्दाबाट निजात गर्ने अनुरोध गरेका हुन्। विमलको मुद्दा अझ पनि न्यायिक प्रक्रियाअनुसार नै चलिरहेको छ। सरकारले मुद्दा माफी गरेको छैन। न्यायालयले केवल राहत प्रदान गरेको हो।
विमलको आङमा अनेकौं मुद्दा छन्। चुनाउको बेला यस्ता मुद्दा लागेका संदिग्ध व्यक्तिहरू पुलिस प्रशासनको निगरानीमा हुन्छन्। केही अघि विनय तामाङले भनेका छन्, ‘चुनाउको बेला विमल आफै पहाडमा बस्छन् के त। पिके त काम सकेर फर्किहाल्छन् तर विमलले त्यतिबेला के गर्दा हुन्।’
ममताको नयाँ रुप र पहाड
स्नेगढेन्डु भट्टाचार्यले मिसन बङ्गाल किताबमा उल्लेख गरेअनुसार प्रशान्त किशोरले यस्ता रणनीति तयार गरेका छन्, जसले बङ्गालको प्रशासनिक रुपरेखा नै फेरबदल गर्ने सम्भावना छ। उप्रान्त ममता व्यानर्जीले प्रशासनिक चरित्रलाई जनमुखी बनाउनेछिन्। विकासका हरेक पाटोलाई जनसरोकारसित जोड्ने र त्यसलाई प्रभावकारी र स्थायी बनाउने ममता व्यानर्जीको सोच छ। पुरानो कार्यशैली हटाएर नयाँ कार्यशैली अप्नाउने र राज्यको प्रशासनिक गतिविधिका बाधक, विकास र शान्तिका वाधकलाई निमिट्यान्नै पार्ने योजना छ।
यी योजनाहरूभित्र विमल गुरुङ कहाँ परेका छन्, अनित थापा कहाँ परेका छन्, त्यो बङ्गालको राजनीति र व्यानर्जीको फेरिँदो रणनीतिलाई नजिकबाट चिन्नेले मात्र देख्न सक्ने हो। नयाँ फर्मुलाअनुसार ममता व्यानर्जी दार्जिलिङमा पनि विकास र शान्ति चाहन्छन्। ममता व्यानर्जीको नयाँ रणनीति र कार्यशैली सुहाउँदो प्रशासक विमल गुरुङ हुन् कि अनित थापा? यदि विमल गुरुङ नै उपयुक्त हुँदा हुन् त अनित थापाको कार्यकाल6महिना वृद्धि हुँदैन थियो। अनित थापाकै मियाद बढाउनुले पनि पहाडमा विमल गुरुङ र अनित थापामाथिको ममता व्यानर्जीको दृष्टिकोण स्पष्ट पारेको छ। आखिर ममता व्यानर्जीले विमल गुरुङलाई किन पाखा गरेका हुन् र अनित थापालाई किन काख दिएका हुन्, यसबारे मन्थन गर्नेले वास्तविकता थाहा पाउन सक्छन्।
विमल गुरुङलाई लोप्पा : अनित थापालाई सत्ता